Shirkii Labaad Ee Ururada Jaaliyadaha Soomaaliyeed – Codka Qaranka Tanadland
Shirkii Labaad Ee Ururada Jaaliyadaha Soomaaliyeed
Perceived Objective Correspondence Rate By The Public (%)
Customers Satisfaction Rate (%)
Projected Attainable Target (%)
Audience Interaction (%)
Audience Feedback (%)
Tanaland Media Customers Satisfaction Verdict
[Khudbadda maareeyaha wakaaladda jaaliyadaha soomaaliyeed (Eng. C/qaadir Axmed Kamtiirey Aw-maxamed Liibaan). Taariikhdu markay ahayd (12/01/2015) waxaa lagu soo gebagebeeyey magaalada Kigali ee wadanka Ruwanda shirkii qurbejooga soomaaliyeed. Shirkaan oo ahaa midkii labaad oo noociisa ah ayaa kal hore ka dhacay magaalada Istanbul ee wadanka turkiga. Shirka qurbejooga soomaalida waxaa looga golleeyahay sidii dadka soomaaliyeed ee dibadaha ku nool looga talogelinlahaa qorshaynta dalka soomaaliya. Wasaaradda arimaha dibedda ee soomaalya waxay in mudaaba ku hawlanayd in ururada qurbejooga soomaaliyeed ay xiriir joogto ah la yeelato. Dowladdii ku KMG ahayd intii ay talada dalka haysey waxaa jirtey wasaarad la yiraahdo (Wasaaradda Jaaliyadaha Soomaaliyeed), wasaarad daas oo u wasiir ka ahaa duuliye sare (Cabdulaahi Axmed Cabdule “C/laahi Azhari”.
Taariikhdu markay ahayd (12/01/2015) waxaa lagu soo gebagebeeyey magaalada Kigali ee wadanka Ruwanda shirkii qurbejooga soomaaliyeed. Shirkaan oo ahaa midkii labaad oo noociisa ah ayaa kal hore ka dhacay magaalada Istanbul ee wadanka turkiga. Shirka qurbejooga soomaalida waxaa looga golleeyahay sidii dadka soomaaliyeed ee dibadaha ku nool looga talogelinlahaa qorshaynta dalka soomaaliya. Wasaaradda arimaha dibedda ee soomaalya waxay in mudaaba ku hawlanayd in ururada qurbejooga soomaaliyeed ay xiriir joogto ah ay la yeelato. Dowladdii ku KMG ahay intii ay talada dalka haysey waxaa jirtey wasaarad la yiraahdo (Wasaaradda Jaaliyadaha Soomaaliyeed), wasaarad daas oo u wasiir ka ahaa duuliye sare (Cabdulaahi Axmed Cabdule “C/laahi Azhari”.
Wadamada caalamka oo dhan waxay leeyihiin hay’ad wasaaradda arimaha dibedda ka tirsan oo u qaabilsan xiriirka jaaliyadaha dibedda, kana qaybqaata qorsheyaasha wadamadooda lagu horumarinayo oo dhan. Jaaliyaduhu waxay ka qayb qaataan doorashooyinka axsaabta dalalkooda iyo shaqsiyaadka mudan inay hogaamiyaan lagu xulayo. Waxay kaloo jaaliyaduhu kaalin fir-fircoon ay ka qaataan horumarka dhaqaalaha iyo maalgelinta dalkooda. Abaabulka jaaliyadaha soomaalida muhiimaddiisu waa in laga talogeliyo hanaaka iyo qorsheyaasha horumarinayo dalka. Xag dhaqaale, xag ijtimaaci iyo xag siyaasadeedba qorsheyaasha dowladda inay jaaliyaduhu kaalintooda ka qaataan. Ruux kasta oo soomaali ah waxaa saaran masuuliyad ah inuu ka qaybqaato horumarinta dalkiisa hooyo.
Waxaa kaloo lamahuraan ah inuu taladiisa ka dhiibto sida ugu haboon ee axsaabta dalka loo maareynkaro. Ma labo xisbi ayuu dalkeenu u baahanyahay mise sadex xisbi. Tirada axsaabta doorashooyinka soo socda ka qaybqaadanaya dalka mawaxaa dan u ah in la xadido mise inaan la xadidin. Hanaanka siyaasadeed iyo qorsheyaasha la doonayo in dalka soomaaliya lagu horumarinayo, waa arin muhiim ah in jaaliyadaha soomaaliyeed lagala tashado. Dowladda soomaaliyeedna waa ay ku amaanantahay dadaalka ay wado iyo abaabulka ay ku abaabuleyso jaaliyadaha soomaaliyeed.
Wakaaladda jaaliyaddaha soomaaliyeed waxay labadii shir ee ugu danbeeyey ay kulmisay wakiilada ururada jaaliyadaha soomaaliyeed. Shirkii ugu danbeeyey ee lagu qabtay magaalada Kigali ee wadanka Ruwanda. Wuxuu socdey mudo shan maalmood ah, waxaana ku kulmay 100 xubnood oo ka kal socdey ururada jaaliyadaha iyo golaha imaamyada soomaaliyeed. Waxaana laga filayaa xubnaha jaaliyaduhu marka ay ku noqdaan wadamadii ay ka yimaadeen inay bulshada ay ka yimaadeen u gudbiyaan nuxurka shirka.
Wasaradda arimaha dibedda soomaaliya hada waxay leedahay wakaalad u qaabilsan iskuxirka jaaliyadaha soomaaliyeed, waxaana agaasime ka ah (Eng. Cabdulkadir Axmed Kamtiirey Aw-maxamed).